नेपालकै अनौठो शक्तिसाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनै ऐनाले भरी भरीभराउ छ, ॐ लेखी भेटी स्वरुप सबैले सेयर गरौ हेर्नुहोस भिडियो ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालकै अनौठो शक्तिसाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनै ऐनाले भरी भरीभराउ छ, ॐ लेखी भेटी स्वरुप सबैले सेयर गरौ हेर्नुहोस भिडियो !
त्यसको केही समयपछि यात्रुवाहक वस शुनकोशी नदीमा खस्दा ४२ जनाको निधन भएको थियो, जसको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर सप्ताह पनि लगाइदिए स्थानीयहरुले । सप्ताह लागेको बेला एक्कासी एउटी महिलामा देवी उत्पन्न भएर उनले बोकेको भरमा कोशीमा गएर सेतो ढुङ्गा लिएर एउटा रुखको जराको सेतो र रातो कपडाको धोजा बनाएपछि मन्दिर बनाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । देवी मातालाई मन पर्ने भनेर ऐनाहरु राखियो । बिस्तारै ऐनाले धेरै संख्या लिन पुग्यो ।ऐनाको दृश्यमा भुतप्रेत आउने नसक्ने र मानिसलाई दुःख दिन नसक्ने भएकाले यस स्थानमा ऐना राख्ने गरिएको जनविश्वास रहेको छ । आजभोलि त्यस स्थानमा जाने जोकोहीले पनि ऐना टाँस्ने गर्दछन् । यात्रु होस् या सर्वसाधरण त्यस ठाउँमा पुगेपछि केही समय रोकिएर ढोग्ने गर्दछन् । अझै पनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै मानिसहरुको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुने गर्दछ ।यस्तो छ तेहा बनाएको एक भिडियो रिपोर्ट भिडियो सहित।
अटो चलाएरै पबित्राले ठडाइन् ३ तले घर…(भिडियो हेर्नुस)
सर्लाहीमा दुई बच्चासहित आमा मृxत अवस्थामा फेला
सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको गुणस्तरिय खोप उपलब्ध गराउने : अर्थमन्त्री पौडेल